Iyo 6-Nhanho Matekiniki Kuvimbika Yakagadzirisa Chero Bug
Paunenge iwe wawana chivimbo chekuti iwe wagadzirisa iyo bug, iwe uchazoda kuona kana shanduko dzako dzichizokonzeresa shanduko yesystem kukundikana, kushanda, kana kunzwisiswa.
Kana iwe ukaona kuti kuyedza mamwe mamodule kana nzvimbo dzechikumbiro iko kukanganisa kunowanzoitika, usatarise pakugadzirisa iyo bug. Kana dambudziko nyowani rikakanganisa kugona kwako kwekutambudza (semuenzaniso, kupunzika zvakanyanya zvekuti haugone kuita zviedzo zvako), unofanirwa kuisa pamberi pekugadzirisa matambudziko ako. Kugadzirisa matambudziko kwakakosha, asi zvakakoshawo kuti uone nzira dzekugadzirisa maitiro ako.
Kana timu ichizadzwa nemishumo yebug apo neapo, zviri nyore kuwira mumusungo wekuwira nemusoro muhutsinye kugadzirisa kuwanda kwematambudziko pasina chiratidzo chematambudziko akadzika. Kana munhu wekuyedza akawana bug mune isiriyo vhezheni yeiyo chaiyo kodhi base, zvingave zvisingaite kutsvaga kwakabva dambudziko. Operating system, compiler, framework, kana library bugs mune yako Software inogona kunge isingakuvadzi, asi mikana yako midiki yekuita kuti mutengesi ateerere kwauri kana iwe ukasapa matanho ekubereka dambudziko.
Zvakafanana nekuti musayendisiti anoedza sei dzidziso kana mutikitivha kuratidza nyaya, iwe unoda nzira yakatendeka yekudzokorora chikanganiso kuti uishandise sekiyi yeuchapupu. Paunenge iwe waedza iyo kesi yekukanganisa, chichava chinangwa chako kuita basa rekuyedza. Chikwata chinopedzisa nhanho 1, uye kana iwe uchinge wapedza izvo zvaitika, wongorora humbowo uye wozopedzisa wega kuti ungadzokorodza sei chikanganiso.
Paunenge iwe wagadzirisa iyo bug, iwe unoda kuchengeta ese ebvunzo bvunzo mune yako regression bvunzo suite kuti uone kuti bug haina kuzoitika zvakare. Iko kuedza kwaunoisa mukugadzira iyo kesi bvunzo idiki uye inodzokororwa ichabhadhara kana iwe uchimhanya ichidzokororazve iwe uchitsvaga iyo bug uye ukagadzira mhinduro yayo. Kana uchinge wawana kadhi diki rekuyedza, tsvaga uye urigadzirise uye wozodzokera kune yekutanga isiriyo yekuisa kuti usimbise kuti wakazvigadzirisa.
Shanduko dzinodiwa kugadzirisa bhagi dzinodhura, dzinokanganisa zvimwe zvinhu zvakawanda, uye dzinoda kuyedzwa kwakawanda. Iko kukuvara kwechibatiso ndiko kuunzwa kwekukanganisa kwakasiyana siyana uye kodhi shanduko (kusanganisira bug fixes) zvine chekuita nekuswedera padyo padyo nezuva rekuburitsa. Kana iyo tsikidzi ichida kugadziriswa kuti ibudirire iri kuuya, haisi yepamusoro kukoshesa.
Kunyangwe iri diki sei iyo iteration iri, nhanho-nhanho kuuraya kunobatsira kuchengetedza mabugs ari pasi pekutonga uye inovimbisa kuti iwe unozvigadzirisa pakutanga mune yako maitiro kana iwo akachipa kuwana nekugadzirisa.
Nhanho chete yakakosha ndeye Developers kushanda pakugadzirisa mabhugi akawanikwa usati watanga kuvandudza kutsva. Kugadzirisa matambudziko kunosiyana nemhando yechigadzirwa uye basa rakakosha. Iyo yekugadzirisa bug kuronga ndeye kugadzirisa bug pamberi pechigadzirwa uye kushanda pamwe nechikwata chekuzivisa bug kugadzirisa zvikwata zvakadaro.
Danho rekutanga ndere faira rebug kuti uone dambudziko. Kune akawanda akasiyana marudzi ezvikanganiso zvehurongwa izvo zvinokonzeresa zvikanganiso zvekushandisa system uye zvinoda chaiwo bug gadziriso dzinoda kugadziriswa nebudiriro uye zvimwe zvikwata zveIT. A bug fix is ​​a change in the system or product patani kugadzirisa kukanganisa kwepurogiramu kana glitch.
Kuti uite Coldfix, mushandisi anofanira kupinda mukati Software uye iyo yese system inofanirwa kutangwa patsva kuti kugadzirisa kuite. Kukanganisa kuvuza kunoitika kana chikanganiso chikaonekwa nemushandisi wekupedzisira (mutengi) uye kwete nechikwata chebvunzo chakaedza Software.
Chigamba mutsara wekuchinja kuchirongwa chekombuta kana data rayo rinotsigira iro rakagadzirirwa kugadzirisa, kugadzirisa, kana kuvandudza chirongwa. Kugadzirisa kunogona kunge kuine zvigadziriso zve chibatiso kusakuvara kana zvimwe zvipembenene, senge zvigamba (zvinodaidzwawo kuti gadziriso dzebug kana gadziriso dzebug).
Software makambani anoburitsa zvigamba kugadzirisa tsikidzi muzvirongwa zvavo, gadzirisa chibatiso nyaya, uye kuwedzera kushanda. Mazhinji mavhezheni ane musanganiswa wekuchinja maitiro uye akati wandei mabug kugadzirisa.
Kana nguva dzebhafa dzave chikamu chemazuva ese uye kuba nguva kubva kune zvimwe zvisungo, kwete ese mabug anogadzirisa anokodzera mukati menguva yakapihwa. Mamwe mabhugi ane zvakakosha zvakaringana kubvumidza kuburitswa kwakati, kana zvikamu zvekodhi iri mumodule inoda kugadziriswa. Hurongwa hwekutanga hunofanirwa kuenderana nekuburitswa kwechigadzirwa, semuenzaniso Nekukosha kwakakosha, zvichiratidza kuti bug rinofanirwa kugadziriswa mune inotevera. Software kusunungurwa.
Apo a Software timu iri kushanda pamapurogiramu akati wandei, inofanirwa kuunganidza ruzivo nezve tsikidzi dzakapfuura uye kuti dzakatora nguva yakareba sei kuzvigadzirisa. Sumai bhenji Chikwata chinofanirwa kushandisa mucherechedzo kufungidzira kuti mangani mabhugi aanogona kugadzirisa pamwedzi.
Shandisa yekumisikidza nguva yekugadzirisa zvebug: ipa chikamu chezuva rako rebasa kugadzirisa zvikwangwani zvenguva yekubata. Troubleshooting inowanzo kukurumidza uye isinganyanyo kanganisa zvikwata zvekugadzira zvine nzira yakarongwa. Deredza huwandu hwegadziriro dzebug dzinogona kugadziriswa panguva imwe chete kuenda kunhamba diki.
Kutanga nekuunza zvese izvo zvinhu pamwechete pamwe nekukasira kana bug iri kuratidza. Kana iko kukanganisa kuchinge kwazviratidza mune ese masisitimu ezve system, tanga kuremadza chimwe nechimwe chikamu zvakasiyana uye kuchidzikisira kune mashoma mashandiro kuitira kuti vakwanise kushanda zvakare.
Kana iwe uchinzwa kuremerwa, tora nhanho kumashure uye simbisa kuti iko kukanganisa kunogona kugadziriswa nemhinduro iyi. Vamwe Developers tsvaga ichi chiyeuchidzo chinobatsira kuti usamhanyisa zvinobuda nhanho 2, chero bhagi rakagadziriswa, asi kuti uende nhanho kumberi uye Pushira kumashure.